Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguUta
IBoutique B&B ephumelele ibhaso kufutshane neMelrose & St. Boswell, ime ngqo eSt. Cuthberts's Way.
Ngaba ufuna ngaphezulu kokulala kunye nesidlo sakusasa? Siye savotelwa ngokuba "yeyona B&B kwiMida yaseSkotlani ngo-2018 nango-2019" yiLux Life Magazine kwaye sibonelela ngamagumbi okulala ama-2 obutofotofo, indawo entle yokuziva usekhaya, isidlo sakusasa esimnandi, iimbono ezithandekayo kunye nezona ndawo zifudumeleyo zokwamkela.
Fumana indawo enomlingo ngokwenene kunye nesiseko esifanelekileyo seholide yakho.
KwiGumbi lethu eliMbini, nceda ubone iBowden House B&B, dwelisa 1.
Ime kanye e-St. Cuthbert's Way, iimayile ezi-3 ukusuka eMelrose nase-St. Boswell, i-Bowden House B&B ibekwe ngokugqibeleleyo kubahambi, abathanda imidlalo yangaphandle kunye nabathandi bendalo.
Ukuthandana ukususela ekuqaleni kwenkulungwane ye-19, indlu yethu yelizwe i-B&B igcwele umtsalane kunye nomlingiswa kwaye ibuyiselwe ngothando kwaye yahlaziywa. Inombono omangalisayo wepanoramic phezu kwelali yeBorder kunye neegadi ezinkulu zabucala.
Sinikezela ngezindlu zokulala ezi-2 ezigqwesileyo zeendwendwe zethu-inkosi enkulu ephindwe kabini kunye newele. Omabini amagumbi okulala axhotyiswe ngobuhle ngezinto zakudala kwaye zonwabela imbonakalo ejonge emazantsi emaphandleni-ingoma yeentaka ivuka. Amagumbi ethu okuhlambela kunye nee-en-suite zikumgangatho wobunewunewu kunye nezinto zangasese ezibonelelweyo.
Igumbi lethu lokulala elitsha elithandekayo leMahogany Twin lineebhedi ezi-2 zika-Edwardian mahogany ezingatshatanga, iTV yescreen esisicaba, iindawo zokwenza iti/kofu kunye neWifi yasimahla.
Igumbi leshawari eline-ensuite lifakelwe ishawari yemvula yaseHansgrohe, indlu yangasese yobude obutofo-tofo, isiporo sethawula eshushu kunye nokufudumeza ngaphantsi.
Iindwendwe zethu zamkelekile ukuba ziphumle kwaye ziphumle kwindawo yethu yokuphumla epholileyo ngomabonakude, imidlalo yebhodi, umlilo welog kunye nenkqubo yethu yesandi yeBang & Olufson. Uya kuba nokufikelela kwi-Wifi yasimahla kuyo yonke indlu.
Ukutya kuya kuhanjiswa kwigumbi lethu lokutyela elithandekayo elineengcango zepatio ezivuleleka kwithambeka kunye negadi.
Isidlo sangokuhlwa kunye nesidlo sasemini esipakishweyo sinokubonelelwa ngesicelo.
Kukho igumbi lebhoyila eshushu yokushiya izihlangu ezimanzi kunye nempahla yangaphandle kunye nendawo enkulu yokugcina iibhayisekile kunye negalufa okanye izixhobo zokuloba.
I-Bowden House B&B ihleli kwindawo yomlingo eneembono ezimangalisayo zepanoramic kuzo zonke iindawo eziqengqelekayo zeBorders. Ibekwe kumbindi welali encinci nezolileyo yaseBowden kwaye yonwabela ukuba bucala ngokupheleleyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Uta
Ndiyavuya kakhulu ukuba ndikuhoye kwaye ndikunike isidlo sasemini esipakishiweyo xa uceliwe. Sisenokwenza amalungiselelo okuthatha / ukuthuthwa ukuya nokubuya kwiindlela zakho zokuhamba kwindawo, ukuba usazise kwangaphambili.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Scottish Borders